ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: March 2010
ပျားဘုရင်မ မှ အဆက်
ဒို့ဘဝကို အတိုချုံးပြောရရင် ဝိုင်အိုင်တီတက်ဖို့ ရန်ကုန်ကို သွားခဲ့တယ် အဆောင်မှာနေတယ်၊ ကျောင်းတက်တယ်၊ အဆောင်က ဘော်ဒါတွေထဲမှာ ဇယားတွေ ပါလာတယ်။ သူတို့နဲ့ ခင်တယ်။ ကိုယ့်မှာလည်း အကြံအစည်တွေနဲ့မို့ သူတို့နဲ့ နီးစပ်အောင် ပေါင်းရပါသေးတယ်လေ။ မကောင်းသော မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ လေ့လာစရာတွေလည်း အများကြီး လေ့လာဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ နောက် ကျောင်းတွေက ပိတ်နဲ့ နယ်မပြန်တော့ပဲ သူတို့နဲ့ အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာ စအလုပ် ဆင်းတယ်။ ပထမတော့ ရိုးရိုး ခေါင်းလျှော်ပေါ့။ အဲဒီဆိုင်မှာ ဈေးဖွင့် ဈေးခေါ်တွေ လုပ်နေကြတာတွေလည်း တွေ့နေရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူငယ်ချင်းအကြံပေးတဲ့အတိုင်း မိန်းမတွေ အထာကျွမ်းတဲ့ လာနေကြဖောက်သည်တစ်ယောက်နဲ့ ချိတ်ပေးကြတယ်။ စစချင်း ဈေးကောင်းမရပါဘူး၊ ငယ်ငယ်က သစ်ပင်တက်၊ စက်ဘီးစီး လဲတာလည်း ခဏခဏပဲ အဲဒီတော့ အပျိုမစစ်ဘူးဆိုပြီး ငွေကို လျော့ပေးတယ်လေ၊ အဲဒါနဲ့ ရည်းစားနဲ့ နေခဲ့လားလို့ မေးတယ် ရွဲ့ချင်တာက များနေတော့ ဟုတ်တယ်လို့ပဲ လွယ်လွယ်ဖြေလိုက်တယ်။ မျက်စိထဲမတော့ ငယ်ချစ်ဦးရဲ့ မျက်နှာကို အားနာပါးနာ မြင်လိုက်မိသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘဝကို စလိုက်တာ ဒီနေ့အထိပဲ ဆိုပါတော့ အသက်လေးဆယ်လောက်ကျရင်တော့ နားတော့မှာပါ၊ အရွယ်လည်း ကျချိန်ရောက်ပြီ ဘာသာရေးနဲ့ စီးပွါးရေးဘက်ကိုပဲ အာရုံစိုက်လုပ်ဖြစ်တော့မယ်။
ဒို့တွေ အလုပ်ဆင်းခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ ယောက်ျားတွေက အသက်အရွယ်အားဖြင့် အငယ်ဆုံး ငါးတန်း ခြောက်တန်းအရွယ်မှ အသက်အကြီးဆုံး (၇၀)ကျော်အရွယ်အထိ လိင်ဖျော်ဖြေရေး နေရာများတွေကို သွားရောက်လေ့ ရှိကြတယ်လေ။ သူတို့မှာလည်း အသက်အရွယ်တွေပေါ် မူတည်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုး ဆန္ဒအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့။ ငယ်တဲ့ အရွယ်မှာက လိင်ဆက်ဆံမှုကို သင်ယူတတ်မြောက်လိုတာ။ နောက် သူတို့ သဘောကျ မိန်းကလေးနဲ့ ဆိုရင် သူတို့က ခေါင်းဆောင်မယ် ဆရာကြီး လုပ်ချင်ကြတယ်လေ၊ ဒါကြောင့် လူပျိုစစ်စစ်တွေက အခကြေးငွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ မိန်းမတွေ ဆီမှာ လူပျိုဘဝကို ရက်ရက်ရောရော စွန့်လွှတ်ကြတယ်။ ယောက်ျားတွေက သူတို့ လူပျိုဘဝဆိုတာ အဲ ...မပြောကောင်း မဆိုကောင်း ခွေးတွေ အပေါ့အခင်းသွားတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ဘယ်နေရာမှာ စွန့်မယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊ ထမင်းစား ရေသောက်တာကမှ ခက်အုံးမယ်၊ သူတို့အတွက် ဒီကိစ္စတွေဆိုတာက ဘာမှကို အလေးအနက်ထားတာ မဟုတ်ကြဘူး။
နောက်တော့ လူပျိုဘဝလေးမှ အသက်လေး ရလာတာနဲ့ အမျှ ကဲချင်ကြပြန်ရော၊ ပညာတတ်သွားတော့ ကြည့်တတ် မြင်တတ် ကျွမ်းကျင်ကြပြန်ရော။ တစ်ခါ အရသာ သိသွားတော့ အရသာနောက်ကို လိုက်ကြပြန်တယ်။ ဒီခြားထဲ သူတို့ မြတ်နိုး ကြင်နာလိုတဲ့ မိန်းမနဲ့ တွေ့ရင်တော့ အိမ်ထောင်တွေ ဘာတွေကျပေါ့။ အိမ်ထောင်ကျခါစ အချိန်ဆိုလည်း လိင်ဖျော်ဖြေရေးနေရာတွေနဲ့ ခဏ အဆက်အသွယ် ပြတ်ပြန်တာပေါ့။ တချို့တွေလည်း မိန်းမနဲ့ အဆင်မပြေတော့ တခါ ဒီနေရာတွေကို ပြေးလာပြန်ရော၊ ပြီးတော့ တစ်ခါ မိန်းမနဲ့ ကြိုးစားကြပြန်ရော၊ မိန်းမက အရှက်သည်း၊ လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတမရှိရင်သောလည်းကောင်း၊ မိဘတွေနဲ့ တွဲနေရတဲ့ တစ်အိမ်တည်းမှာ နေရတဲ့ အခါတွေမှာ သောလည်းကောင်း အဆင်မပြေတာတွေ ဖြစ်ကြတာပေါ့။ အဲဒီအခါ ယောက်ျားတွေမှာ ဗျာများရ ပြန်ရော၊ သူတို့က မိန်းမနဲ့နေတဲ့ စည်းစိမ်ကြတော့ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပြန်ဘူး၊ အောင်မြင်လိုကြတယ် ဆန္ဒပြည့်ဝလိုတယ်၊ မိန်းမကိုလည်း သူတို့လို ဖြစ်စေချင်ကြပြန်ရော။ ဒါတွေက အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ အသက်အရွယ်တွေပေါ့။
အဲသည်လိုနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာ (၂)နှစ်လောက်အကြာမှာ ပျင်းလာကြပြန်ရော တစ်ခါ ကလေးယူတော့ မိန်းမက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် စောင့်ထိန်းနေရတဲ့ လတွေမှာ တစ်ခါ စိတ်ဖျော်ဖြေဖို့ ရောက်လာကြပြန်ရော။ ဒီလိုနဲ့ မိန်းမတွေ အရွယ်ကျချိန်ဖြစ်တဲ့ အသက် (၄၀)ရောက်ချိန်မှာ ယောက်ျားတွေကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တက်ကြွဆုံးအချိန် ရောက်ပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းမက ငယ်နေရင်တော်သေးရဲ့ နို့မဟုတ်ရင်တော့ အပြင်ထွက်ချိန် ပိုများ လာကြတော့တာပေါ့။ အရသာအမျိုးမျိုးကို စမ်းသပ်ချင်ကြ ခံစားတတ်ကြတဲ့ အာရုံခံစားမှုက မိန်းမတွေထက် ယောက်ျားတွေက ပိုလည်းများတယ် ပိုလည်း ခံစားတတ်ကြတယ်လေ။ ဒါကို အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတိုင်း နားလည် လက်ခံ ပေးနိုင်မယ၊် ကိုယ့် အမျိုးသားစိတ်ကို သိနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုအချိန်တွေမှာ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်စိတ် အများဆုံး အချိန်မှာ အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အိမ်ထောင်ရှင် မိန်းမတွေက ထိန်းတတ်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
ယောကျာ်းများကို ထိန်းနည်း (၄)နည်းရှိပါသတဲ့...။
ပထမနည်းကို ရွေးချယ်အသုံးပြုသော မိန်းကလေးသည် သဘောထား အဖြူစင်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးမျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်မိသော ယောကျာ်းသည် ကံကောင်းသော သူ ဖြစ်သည်။ သူမသည် သူမချစ်သော ယောကျာ်း ကို လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူမအတွက် တစ်ခုသော မျှော်လင့်ချက်မှာ မိမိပြင်ဆင် ချက်ပြုတ် ထားသော အရသာရှိရှိ ထမင်းကောင်း ဟင်းလျှာများကို မိမိယောကျာ်းက အချိန်မှန်မှန်ပြန်လာ စားရန်သာ ဖြစ်သည်။ တခြားဘာမှ မလို၊ ဘာမှ နားမလည်သော ခပ်ရိုးရိုး ပုံမှန် မိန်းမသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါ။
၂. ပိုက်ဆံကို ထိန်းနည်း
ယခုနည်းကို အသုံးပြုကျင့်ကြံသော မိန်းကလေးသည် ပါးနပ်သောသူ ဖြစ်သည်။ ငွေသည် ယောကျာ်း၏အသက်၊ ငွေသည် ယောကျာ်း၏မာန၊ ယောကျာ်းများကို ငွေဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် အထိရောက်ဆုံးဟု ထင်မြင်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးအများစုသည် ဒီနည်းကို ကြိုက်ကြသည်။ သူမ၏ မျက်စိထဲတွင် ငွေဖြင့်အရာရာကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြီးနိုင်သည်ဟု
၃. လူကို ထိန်းနည်း
ယင်းနည်းကို အသုံးချသော မိန်းကလေးသည် ဆင်ခြင် စဉ်းစားဥာဏ် နည်းသောသူဖြစ်သည်။ ယောကျာ်း တစ်ယောက်ကို လွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘဲ ကြိုးချည်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားချင်သော မိန်းကလေးသည် ဒီနည်းကို အသုံးပြုလေသည်။ ဘယ်ယောကျာ်းမျှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ ကြိုးဆွဲရာတွင် လိုက်မကချင်ကြ၊ နွားဖာကြိုးဆွဲပြီး စေလိုရာစေ ဆိုတာမျိုးကို မခံချင်ကြပေ။ ဒီနည်းကိုအသုံးပြုသော မိန်းကလေး၏ အိမ်ထောင်ရေးသည် နေဝင်ချိန် နီးနေပြီဖြစ်ကြောင့် ခန့် မှန်းနိုင်သည်။
၄. မိမိ ကိုယ်ကို ထိန်းနည်း
ဤနံပါတ်(၄)နည်းကို ရွေးချယ်သော မိန်းကလေးသည် အသိဥာဏ် ပညာရှိသော သူဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးမျိုး သည် လောကကြီးသည် မမြဲခြင်းတရား ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ကို သေချာ နားလည်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယောကျာ်းများကို အစားကောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုဖြစ်စေ အရာရာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကို မထိန်းနိုင်ပါက လူဖြစ်ရသည်မှာ အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့လှသည်ဟု ယုံကြည်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရမည်။ တစ်ပါးသူအတွက် အသက်ရှင်နေခြင်း မဟုတ်ပဲ မိမိဘာသာ ရပ်တည်နိုင်သော၊ ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာနိုင်သော မိန်းကလေးဖြစ်ရမည်။ အရာရာကို ဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ခွင့်လွတ်စွာ နေတတ်နိုင်ရမည်။ ထိုမိန်းကလေးမျိုး၏ စိတ်သည် အမြဲတည်ငြိမ်နေသည်။ မိမိယောကျာ်းသည် မည်မျှပင် ချမ်းသာပါစေ ထိုစည်းစိမ်တွင် သူမ ယစ်မူးခြင်း မရှိပေ။ မိမိဆောင်ရွက်နိုင်သမျှ ကြိုးစားရင်း ဘ၀ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်သာ ကုန်လွန်စေချင်သော မိန်းကလေးမျိုးဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်ကို အသိတရားဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သော မိန်းကလေးမျိုးသည် မိမိယောကျာ်းက ကိုယ်ကိုထားခဲ့ပါစေ၊ ချစ်သူကပဲ ထားခဲ့ပါစေ၊ ဖြစ်လာသမျှကို ပြုံးပြုံးလေးနှင့် ရင်ဆိုင်နိုင်သော စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သော မိန်းကလေးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူမ၏ အသက်သည် ယောကျာ်းတစ်ယောက်အတွက် ချစ်သူတစ်ယောက်အတွက် မဟုတ်၊ မိမိ အတွက်သာဖြစ်သည် ဟု နားလည်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကဲ ဒါဆိုရင် ......
သင်သည် ဘယ်လိုမိန်းကလေးမျိုးကို လက်ထပ်ယူချင်ပါသလဲ.......။
မိုးရေစက် ဆိုဒ်မှ ထပ်ဆင့် ကူးယူဖော်ပြပါတယ်ရှင်။
(ဒီပိုစ့်လေးကို တွေ့မိတော့ ဘာများလဲလို့ စာဖတ်သူတိုင်း စိတ်ဝင်စားကြမလားပဲ။ သူများနည်းတူ ကျမလည်း ဘာတွေများလဲပေ့ါလေ ခေါင်းစဉ်လေးကြောင့် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်မိပါတယ်။ ကောင်းမွန်သော စာသားလေးများကို ဖတ်မိတော့ စဉ်းစားစရာလေးတွေ ပေါ်လာလို့ နဲနဲလေး ပြင်ရေးလိုက်မိပါတယ်လို့ ရိုးသားစွာ ဝန်ခံပါတယ်ရှင်။ ဒါကြောင့် ဘဝဇာတ်ခုံထဲ အပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ ပျားဘုရင်မပိုစ့်ထဲမှာ ထပ်ဆင့်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ် - ခရစ္စတလ်)
ဒီအရွယ်တွေက ကျော်လွန်လို့ အသက် (၅ဝ)ကျော် အရွယ်တွေမှာတော့ ဝပ်လျှော့ရောက်နေတယ်၊ စီးပွါးရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစည်းအဝေး၊ နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်ကို ဧည့်ခံနေလို့ စသည် စသည်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်များစွာနဲ့ အိမ်ပြန်နောက်ကျခြင်း၊ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် ခရီးဝေးသွားခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတော့တာပါပဲ။ ဒီအသက်အရွယ်တွေမှာတော့ အိမ်က မိန်းမနဲ့ တစ်စခန်း ရပ်ကုန်ကြပြီလေ။
အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာနဲ့အမျှ စိတ်သာ ရှိကြပြီး စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ မလိုက်နိုင်တော့တဲ့ အခါတွေမှာ ယောက်ျား အားတိုးဆေးတွေ အကူအညီနဲ့ လှုပ်ရှားကြပြန်ပါရော။ တကယ်ဆိုရင် အိုင်တို့ နေရာတွေက တရားကျစရာကြီးပါ။ ဒါကြောင့် ရိုးရိုးသားသား လက်ထပ်ပါရစေလို့ ပြောလာတာတွေ ရှိလာတာတောင်မှ လက်မခံချင်တော့ဘူး။ မယူခင်အချိန်လေးသာ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ရိုးသားပြ ကြတာပါ။ ယူပြီးသွားရင်တော့ သူတို့ ခြံထဲက ကြက်လေ၊ ကြိုက်တဲ့ အချိန် ရိုက်သတ်စားကြတော့မှာပါ။ ဒါတွေက ယေဘူယျခြုံပြီး ပြောပြတာပါ၊ ဒါမျိုးတွေက ရာခိုင်နှုန်းများတယ်လေ။ တောရော မြို့ပါ ဒီလိုတွေပါပဲ ယောက်ျားဆိုတာ ယောက်ျားပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဟိုတုန်းက အစ်မတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ် ဘယ်မိန်းမမှ လူပျိုစစ်စစ် ရမယ်မထင်နဲ့တဲ့။ ဒါကြောင့် လူပျိုမရှိဘူး လူလွတ်ပဲ ရှိတယ်။ တကယ်တော့ အခုခေတ်အရဆိုရင် လူလွတ်ရရင်တောင် ကံကောင်းပေါ့လေ။
ဘဝဇာတ်ခုံ အခန်းဆက် ဆောင်းပါး
Posted by Crystal at 12:41 PM7comments
ညချမ်းချိန်ခါလေးမှာ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် စကားပြောနေကြတုန်း အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ဖုန်းဝင်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျမလည်း ဖုန်းပြောနေရင်း ကျမရဲ့ အမျိုးသားကို ခဏနော်လို့ အမူအရာ ပြလိုက်တယ်။ အဲ နောက်တော့ အီးမေးတစ်ခု ဝင်လာလို့ ဖုန်းပြောရင်း အီးမေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျမအမျိုးသားက ပို့လိုက်တာပါ “ခွင့်မပြု”တဲ့။ အင်း ဘာကို ခွင့်မပြုတာလဲ ဆိုပြီး ဖုန်းက တစ်ဖက်နဲ့ အီးမေးကို ဖွင့်လိုက်တော့ သဘောပေါက်သွားပါပြီ။ ဒါနဲ့ ဖုန်းပြောတာကို လက်စသတ်ရင်း သူ့ဘက်ကို အာရုံပြောင်းလိုက်ရပါတော့တယ်။ နောက်ထပ် သီချင်းတွေကိုပဲ ဖိရှာနေပြီး ကျမကို စကားလှည့် မပြောပြန်ဘူး။ ကဲ ဘယ်လောက် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကလေးလဲလို့နော်။ သူက အဲဒီလိုမျိုးရှင့်။ လူကြီးတွေက ပြောတာကြားဖူးတယ် ယောက်ျားဆိုတာ ကလေးလိုပဲ အချော့ ကြိုက်သတဲ့၊ ကဲ သူရှာပေးတဲ့ သီချင်းတွေကို ကျမ သေသေချာချာ နားထောင်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်......
ဒီရင်ဟာ မင်းအတွက် အလုံခြုံဆုံးပဲ အိုး
တစ်သက်လုံးပဲ ကိုယ်လေ ချစ်မယ်
ယုံကြည်ပါတယ်/ကွယ် ဒါကို မေ့မသွားနဲ့
တစ်ချိန်ချိန်မှာ မင်းအတွက် မငိုချင်ဘူးကွယ်
အိုး အချစ်ရယ် နိုး နိုး
မုန်းမသွားနဲ့ နိုး နိုး
ခွဲမသွားနဲ့ နိုး နိုး
တေးရေး/တေးဆို - ထူးအိမ်သင်
တေးရေး - နိုင်းနိုင်
တေးဆို - အငဲ
ဒီအောက်က နှစ်ပုဒ်ကတော့ ကျမက ပြန်လည် ပေးပို့လိုက်တဲ့ သီချင်းတွေပါ။
တေးရေး - မြင့်မိုးအောင်
တေးဆို - အငဲ + လေးဖြူ
အခုနှစ်ရက်ရှိပြီ မိုးတွေ အုံ့ လေအေးအေးလေးတွေနဲ့ နွေလယ်ခေါင်ကနေ ချက်ချင်း မိုးအေးသလို ဖြစ်လို့နေပါလား။ ဘဝဆိုတာလည်း ဒီလိုပဲ ရုတ်ချည်း ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သဘောလေးတွေ ရှိတတ်ပါလားလို့ တွေးနေမိပါတယ်။ ဒီလိုရက်လေးမှာ မြန်မာပြည်သိန်းတန်သီဆိုထားတဲ့ သောက တောင်တန်း သီချင်းလေးကို ရုတ်တရက် ကြားမိတဲ့အခါ...။ သီချင်းလေး ပို့ပေးတဲ့ ကျမရဲ့ အမျိုးသားကို သတိရတာနဲ့ သူအလုပ်ကနေ ပြန်လာရင် နားထောင်ပါစေလို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပိုစ့်လေး အဖြစ် အမှတ်တယရေးလို့ တင်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ စာဖတ်သူတွေလည်း သီချင်းလေးတွေကို နှစ်သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက နံနက်ခင်းမှာ ဖခင်လုပ်တဲ့သူက သမီးငယ်ကို စာပြပေးနေပြီး၊ မိခင်ကတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ သားအဖနှစ်ယောက် စာသင်နေကြပုံကို နားထောင်လို့ နံနက်စာ ပြင်ဆင်နေ၏။
ဖေကြီး။ ။ မီးငယ် စာကို ကြိုးစားဖတ်မှပေါ့၊ အိပ်ချင်မနေနဲ့တော့လေ တော်တော်ကြာ ဟော နားထောင်ကြည့်စမ်း.............
ဒီပိုင်းက ပဲပြုတ်၊ ပဲပြုတ် ယူကြအုံးမလား အစ်မတို့ရေ...................
ကြားလား မီးငယ်မ၊ တော်ကြာ ပညာတတ်ကြီးမဖြစ်ရင် ပဲပြုတ်လိုက် ရောင်းနေရလိမ့်မယ်။
သမီး။ ။ ဖေကြီး မီးငယ် ပဲပြုတ်သည် လုပ်မယ်လေ။
ဖေကြီး။ ။ဟေ ဘာဖြစ်လို့တုန်း...။
သမီး။ ။ ဟီး ဟီး သမီး ပဲပြုတ်ကြိုက်တယ် ဖေဖေရဲ့။
မေကြီး။ ။ဘယ်နဲ့ ရှိစ အဖေကြီး (ပြုံးစစနှင့် မျက်စပစ်ကာ)။
ဖခင်လုပ်သူက မူလတန်းအရွယ် သမီးငယ်ရဲ့ နဖူးလေးကို ဖွဖွမွှေးကြူရင်း ငါ့သမီးကတော့လေဟုသာ....။
ဒီလိုနှင့် နံနက်ခင်း စာသင်ကြားခြင်းသည် မိသားစုရယ်မောခြင်းများနှင့် နံနက်စာ စားသောက်ကာ အဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
တခါတုန်းက မိသားစု အမှတ်တယများ (ခရစ္စတလ်)
Posted by Crystal at 12:28 PM5comments
ငိုလည်း ချစ်တယ်၊ ရယ်လည်း ချစ်မယ်၊
ခြေ လှမ်းတတ်အောင် သင်ပေးမယ်။
ကလေး လေးတွေရဲ့ ရယ်သံ ငိုသံ ဂျီကျသံတွေနဲ့ အမြဲလိုလို ကြားနေရတဲ့ ဘဝမှာ စိတ်ကြည်နူးစရာ တကယ်ကောင်းပါရဲ့။ တခါတလေလည်း နားတွေ ပူလွန်းလို့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမရော ငယ်စဉ်က အမေ့ကို အဖေ့ကို ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ဂျီကျခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လိုများ စိတ်ချမ်းသာစေမလဲ စသည်ဖြင့် အဖေ အမေတို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာ ဘယ်လိုများနေမလဲလို့ ခဏခဏ ပြန်တွေးမိပါတယ်။ ငယ်စဉ်တုန်းက ကလေးဘဝကို ပြန်တွေး အောက်မေ့နေမိသော ရက်များပင် ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Posted by Crystal at 6:36 PM4comments
စက်ချုပ်ရန်၊ ဂေဟာများကို ပို့ပေးရန်၊ ပညာသင်ရန် စသည်တို့ ဘာမျှမလို။ မိမိတို့သည် လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် အဓိကထား လုပ်ကိုင်သော သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မိမိတို့၏ ကျန်းမာရေးကို အထူး ဂရုစိုက်၏၊ ဧည့်သည်များကို ဖျော်ဖြေရာတွင် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေရန် အဓိကထားဆောင်ရွက်ပါသည်။
လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ဆောင်ပုဒ်သဏ္ဌာန်ပုံစံမျိုးအပြင် သူမ၏ အလှအပနှင့် ကျော်ဇော ထင်ရှားမှုတို့ကြောင့် သူမနှင့် ဆုံတွေ့ရန် ကြိုးစားရပါတော့သည်။ သူမကို “ပျားဘုရင်မ”ဟု တင်စားကြသည်။ ပျားဘုရင်မဟု ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ စာဖတ်သူများ စဉ်းစားတွေးတောကြည့်နိုင်မည်ထင်ပါတယ်။ ပျားဘုရင်မတို့၏ သဘာဝနှင့် ထို့အပြင် သူမ၏ လိင်ဖျော်ဖြေရေး ကျွမ်းကျင်မှုများကို ဆက်နွယ်ပတ်သက်၍ ထိုဘွဲ့နာမည်ဖြင့် ကျော်စောထင်ရှားသူ ဖြစ်လာလေသည်။ သူမသည် ငွေကြေး ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း၊ လှပကျော့ရှင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုထက်မက ပိုင်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်နေပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် သူမနှင့် တွေ့ခွင့် စကားပြောခွင့် ရဖို့ ရင်ခုန်စွာ စောင့်စားကာဖြင့် တနေ့တွင် သူမနှင့် စကားပြောဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် သူမသည် ဆယ်တန်းအောင်စဉ်က စက်မှုတက္ကသိုလ်တက်ရန် အမှတ်မီခဲ့ခြင်း၊ သူမ ပြုဖူးသော ကုသိုလ်တရားများနှင့် ဘာသာရေးခံယူချက်ကိုပါ တအံ့တသြနှင့် သိခဲ့ရပြန်ပါသည်။ တွေ့ဖူးခဲ့သော မိန်းကလေးများစွာနှင့် ကွဲပြားခြားနာစွာပင် မှန်သော စကားကို ဆိုခြင်း၊ ရဲရင့်စွာ အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင် လက်ခံတတ်ခြင်းတို့က သူမဘဝကို အရောင်အဝါ တောက်ပစေသည်။
သူမကို သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က “မမ” ဟု တရိုတသေခေါ်ကြလေသည်။ သူမထက် ကျမ၏ အသက်က အနည်းငယ်မျှ ငယ်နေသောကြောင့် သူများတွေ ခေါ်သလို “မမ”ဟူ၍ ခေါ်သောအခါ......“အိုး ...အိုင့်ကို မမ လို့ ခေါ်ဖို့မလိုဘူးလေ၊ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာက ဒီအခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းနဲ့ အလုပ်သဘောအရ ခေါ်နေကြတာပါ၊ အေးအေးဆေးဆေး သက်တောင့် သက်သာ စကားပြောကြတာပေါ့နော့” တဲ့။ ဟုတ်ပါသည် သူမရှေ့မှာ ဘာကိုမှန်းမသိ လွှမ်းမိုးမှုတစ်ခု ခံနေရသလို ခံစားနေရလေသည် ဒါဟာ သူမ၏ ထင်ရှားကျော်စောမှုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် နောက်ပြီး သူမလို အမျိုးသမီးကို စကားပြောရန် သတိများစွာ ထားနေရခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျမသိပ်မေးစရာမလိုပဲ သူမ၏ ဘဝအကြောင်း၊ သူမ၏ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း အောင်မြင်ခြင်း သော့ချက်များ၊ သူမ၏ ဘဝပန်းတိုင် စသည်များကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြင့် ဧည့်သည်များကိုပင် လက်မခံပဲ ကျမကို အချိန်ပေးခဲ့ခြင်း အတွက် အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ သူမ အပန်းဖြေအနားယူလေ့ရှိသော နေချင်စဖွယ် ခြံဝန်းလေးနှင့် တစ်ထပ်တိုက်ပုလေးတွင် သူမ မျှဝေသော ဗဟုသုတများစွာကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဥာဏ်ထက်တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်လို့ မိဘများက ပညာရေးကို အထူး အလေးပေး ကြသည်။ တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်တာကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေးလည်း ဖူလှုံပါသည်။ မိဘများက နယ်မြို့တစ်ခု၏ တည်းခိုခန်းတွင် သမာအာဇီဝဖြင့် အသက်မွေးသော ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ဖခင်က တည်းခိုခန်းတွင် လျှပ်စစ်မီးပြင်၊ ခြံရှင်းရ၏။ မိခင်မှာ သန့်ရှင်းရေး တာဝန်ယူရလေသည်။ သူမငယ်စဉ်က တည်းခိုခန်း၏ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာတွင် နေထိုင်ခဲ့သောလည်း တည်းခိုခန်းသည် မည်သို့သော သူများလာသည် တည်းခိုသည်ကို သူမ မသိခဲ့ပါ။ သူမ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပြသူမှာ သူမ၏ ချစ်သူ ဆရာဝန်လောင်းလေးတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သူမ၏ ကြေကွဲခြင်းများကို ယခုလို ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။
အိုင်တို့နှစ်ယောက် ဒီမြို့က ကျောင်းမှာ ရှစ်တန်းနှစ်ကတည်းက စာကြိုးစားကြတာလည်း အတူတူ၊ မွေးလလည်း အတူတူ၊ စိတ်ထားလည်း တူ၊ ဒါပေမယ့် မတူနိုင်တာက ဘဝပါပဲ။ သူက ပညာတတ်မိသားစုက ပေါက်ဖွားခဲ့ တာဖြစ်ပြီး အိုင်ကတော့ တည်းခိုခန်းတစ်ခုက ဝန်ထမ်းသားသမီးဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ ဆယ်တန်းနှစ်မှာ ချစ်သူဖြစ်ကြပြီး အမှတ်စာရင်းတွေ ထွက်တော့ အိုင်တို့ လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ လမ်းခွဲရတဲ့အကြောင်းကတော့ အိုင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို စွန့်ပြီး တခြားနေရာကို ပြောင်းမယ်ဆိုရင် အနာဂတ်လမ်းက လှပနိုင်မယ်၊ ဒီအတိုင်းနဲ့တော့ မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလာတော့ အိုင့်မှာလည်း မာနတွေ တပုံတပင်နဲ့ ဒီအတိုင်း ဆက်မချစ်နိုင်ရင် ဖြတ်လိုက်လို့ ပြောတဲ့အခါ ကောင်းပြီလေတဲ့။ ဒါနဲ့ အိုင်တို့ နှစ်ယောက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အိုင် သူ့ကို သိပ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း သူဆရာဝန်ဖြစ်တော့ ရပ်ကွက်ဆေးခန်းဖွင့်သေးတယ်။ အိုင်လည်း ရွဲ့ပြီးဆေးခန်းသွားပြလိုက်သေးတယ်။ အဲဒီတော့ သူက ညီမ ဘာဖြစ်သလဲပြောတဲ့။ တကယ်ပါ အတော်နူးညံ့တဲ့သူ။ အိုင်ကတော့ အချစ်နဲ့ စတေးပြီး ဘဝဟာ မာကျော ခါးသက်သွားတော့တယ်။ ဘဝအမှန်ကို သူက ချပြလိုက်ပုံက...သူက လေးဘာသာဂုဏ်ထူးနှင့် ဆရာဝန်လောင်းဘဝကို ရောက်မယ့်သူဖြစ်ခါ သူမက နှစ်ဘာသာဂုဏ်ထူးအမှတ်နှင့် စက်မှုတက္ကသိုလ်ကို တက်ကြမယ်ဆိုတော့ တည်းခိုခန်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မိဘများကို အလုပ်ပြောင်းခိုင်းတယ်။ ဒါဟာ မလွယ်တဲ့ ကိစ္စပဲ ဖခင်က သူ့ သူဋ္ဌေးအပေါ်ကျေးဇူးတွေ ရှိလို့ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ တစ်နေ့ ဒီမှာ ဆက်နေသွားမယ်ဆိုရင် သူများတွေက အပျိုလေးဖြစ်တဲ့ အိုင့်ကို ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့ ပြောတယ်။ အိုင်ကလည်း ကိုယ်ကျင့်တရားကို စော်ကားလှချည်ရဲ့ဆိုပြီး နင် ဂုဏ်သိက္ခာကျမယ်ဆိုရင် ငါ့ကို ဖြတ်လိုက်လို့ ပြောလိုက်တာလေ။ နောက်မှ သိခဲ့ရတာက ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ကိုယ့်ဘဝ လမ်းမှားမှာ စိုးလို့ သတိပေးခဲ့တာပါ။ သူက အကြောင်းရင်းအမှန်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် မရှင်းပြဖြစ်ပဲ အိုင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်နေတာတွေကို အိုင်သိတယ်အထင်နဲ့ ဘာမှ ရှင်းမပြခဲ့ဘူး။ အိုင်ကလည်း မိုက်ရူးရဲဆန်စွာ နာကျည်းတာတွေ မာနတွေ ပြည့်လျှံလို့ အဖြစ်မှန်ရဲ့ အဖြေကို မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူပြောတဲ့အတိုင်း အိုင်တနေ့ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် သူဘယ်လိုမှ လက်မထပ်ဘူးတဲ့ ဒါကြောင့် အိုင် ဒီဘဝကို ရောက်ဖို့ ကိုယ်တိုင် နွံထဲကို ခုန်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့လည်း ဘဝဝဋ်ကြွေးပါလာခဲ့လို့လည်း ဖြစ်မှာပါ။ ချစ်သူကို ချစ်တဲ့ ချစ်ခြင်းကနေ အမုန်း ၊ ဒီအမုန်း အငြိုးအတေးတွေက ဘာလိုမှ မပြေနိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် မြတ်စွာဘုရားကိုတော့ အိုင်တကယ့်ကို ကြည်ညိုခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် တရားစာအုပ်တွေ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်က ပြည့်တန်ဆာတွေ ကချေသည်တွေလည်း သောတာပန်တည်နိုင်ကြောင်းလည်း သိရရော အိုင် တရားအားထုတ်တဲ့ဆီကို ရောက်ခဲ့ဖြစ်တယ်၊ တရားအားထုတ်တော့ တရားကို သိလာရတယ်၊ တရားကို သိရတော့ တရားများ၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရားကို ပိုသိမြင်လာတယ် အရင်ကထက်ပင် ပိုကြည်ညိုလာတယ်၊ လမ်းပြပေးနေတဲ့ သံဃာတော်များကိုလည်း လေးစားကြည်ညိုမိတယ်။ ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတော့မှ ရင်ထဲက အာဃာတတွေက ငြိမ်းအေး သွားရပါတယ်။
Posted by Crystal at 11:39 AM 1 comments
အလှတရား has leftanew comment on your post "အသွားမတော် တစ်လှမ်း။":
ရေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ STD (ကာလသားရောဂါ) နဲ့ TB ဟာ အရေးကြီးတဲ့ မြန်မာ့ကိုယ်ပိုင် ပြဿနာကြီးနှစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ်။ တခါ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကာလသားရောဂါ ပညာပေးနဲ့ အဟပ်မိဖို့ကလည်း မလွယ်ဘူး။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို လူကြားထဲ ပြောရတာ ထင်သလောက် မလွယ်ကူဘူး။ အရင်က လူမှုရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေး ဆေးပညာက ဆရာ ဒေါက်တာ နေစိုးမောင်တို့ ပြောပြပုံအရ ကွန်ဒွန်းတွေကို တီဗီထဲ ကြေညာဖို့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ စာစောင် မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ကြော်ညာသဘောမျိုးနဲ့ Public Desensitization လုပ်ချင်လို့ ခွင့်တောင်းတာကို မနှစ်သက်ကြဘူးလို့ ပြောတယ်။ ကျောင်းတုန်းက လက်တွေ့ ကွင်းဆင်း တုန်းကတော့ ကွန်ဒွန်းကို ပူပေါင်းမှုတ်ပြ၊ မင်္ဂလာဆောင်မှာ ပူပေါင်းချိတ်သလို ချိတ်ပြ ဆော့ပြ၊ sample နဲ့ နမူနာပြကြ အဲဒီလိုလုပ်ပြပြီး လူတွေနဲ့ ကွန်ဒွန်းနဲ့ ရင်းနှီးအောင် မိတ်ဆက်ပေးကြတယ်။ အဲလိုစသည်ဖြင့် ကျောင်းသားတွေ ကိုယ့်ဖာသာ တနိုင်တပိုင် ပညာပေးကြတာလည်း ရှိတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးက ၀ယ်ဖို့ လွယ်ကူဖို့ ကိစ္စပဲ။ ရန်ကုန်လို မြို့ကြီးမှာ condom ကို ၀ယ်ရတာ မထောင်းတာပေမဲ့ နယ်မြို့တွေမှာကျတော့ ၀ယ်ရတာလည်း ခက်တယ်၊ တချို့နယ်တွေမှာဆို လုံးဝလည်း မရောင်းတာမျိုး ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလို့ မရတဲ့ ပြဿနာတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ သဘောပါပဲ။
မှန်ပါတယ်ဆရာ၊ ကွန်မန့်လာရောက်ပေးခဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရေးနဲ့ ဝယ်ယူရာတွင် အဟန့်အတားမရှိနိုင်အောင် ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် မဖေါ်နိုင်ကြသေးဘူးလေ။ ကြိုးစားနေကြတဲ့ အဖွဲ့တွေတော့ ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုးစား နေကြ တုန်းပါပဲ။ အခမဲ့ဖြန့်ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ရှိနေကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်တော့ မလုပ်နိုင်ကြသေးပြန်ဘူး၊ နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာနဲ့ သုံးစွဲနိုင်ရေးကလည်း အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါတွေက အဓိက လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိတဲ့သူတွေက နီးစပ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လက်ဆင့်ကမ်း ကူညီကြနိုင်ကြစေပါလို့ ဒီဆောင်းပါးလေးမှ တဆင့် တိုက်တွန်းပါစေရှင်။ ထပ်မံရေးသားမည့် ပိုစ့်များတွင်လည်း လိုအပ်ချက်နှင့် လူထုအကျိုး ရှိစေဖို့ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဘဝဇာတ်ခုံဆောင်းပါးလေး စရေးစဉ်ကတည်းက လာရောက် အားပေးသူများ ကို၎င်း၊ ကွန်မန့်ပေးကြသူများကို၎င်း၊ ကိုလူထွေးအပါအဝင် ဘလော့ဂါများအားလုံး ကို၎င်း၊ တိတ်တဆိတ် လာရောက်လည်ပတ်သူများ အားလုံးကို၎င်း၊ ရေးသင့်ကြောင့် တိုက်တွန်းအားပေးသော စာဆို ကဝိ နာမည်ကျော် ဘာဘာ တစ်ဦးနှင့် ကျမ၏ ကျေးဇူးရှင်ကို၎င်း အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထိုပီတိတို့ကြောင့် ဆောင်းပါးများကို ဆက်လက် မျှဝေ တင်ဆက်ပေးပါမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။
ကျေးဇူးပြုပြီး သူတစ်ပါးနှင့် မနှိုင်းပါနဲ့ ဒါဟာ ပြိုင်ပွဲမဟုတ်ဘူးလေ...။
"သူ့မိန်းမက အိမ်ထောင်မှု ဘယ်လောက်ထိန်းနိုင်တယ်၊ သူ့ချစ်သူက ဘယ်လိုကြင်နာတတ်တယ်၊ ဘယ်လောက် နားလည်ပေးနိုင်တာ"လို့ ကိုယ့်မိန်းမ၊ ကိုယ့်ချစ်သူကို တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ မခိုင်းနှိုင်းမိပါစေနဲ့။ ကိုယ့်ချစ်တဲ့ သူမရှေ့မှာ မချီးမွမ်းမိစေနဲ့။ သူများ အမျိုးသမီး ဇနီးမယား၊ ချစ်သူလေးတွေ ကောင်းကွက်ကို မြင်နိုင်ရင် ကိုယ့်ဘေးနားက ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူမတွင် ရှိနေတဲ့ အရည်အချင်းတွေကိုလည်း ကြိုးစားမြင်ကြည့်ပေးပါ။ ကိုယ်ချစ်ခဲ့မိလေတဲ့ မိန်းကလေးမို့လား၊ သူမကို မကောင်းမြင်ရင် ကိုယ်ကလည်း မကောင်းတာကြီးကို ရွေးချယ် ချစ်မိလျက်သားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်။ မိန်းကလေးဆိုတာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ လူဆီက ကြားရတဲ့ ချီးကျူးစကား တစ်ခွန်းက ဘဝအတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ အခြားလူတွေဆီက ကြားရတဲ့ ချီးကျူး စကားတွေထက် ပိုတန်ဖိုးရှိသလို ဒီပီတိလေးနဲ့သာ ရှင်သန်နေကြရတာပါ။
အဲ.....သူမတို့ကို ရှုံ့ချမိရင်တော့ အားငယ် ဝမ်းနည်းမှု နာကျင်မှုတွေက သံသရာချီလေပြီ။ “ချစ်စကို ရှည်စေ၊ မုန်းစကို တိုစေ”တဲ့ ကြားဖူးရဲ့မဟုတ်လား။ ကိုယ်ကလည်း သူမအပေါ်ဘယ်လောက် ကောင်းလို့ နားလည်နိုင်သလဲ ကြင်နာ မြတ်နိုးခဲ့ဖူးသလဲပေ့ါ။ တစ်ဖက်သတ် ကောင်းနေတာကို အိမ်ထောင်လို့ မခေါ်ထိုက်လေတော့၊ အိမ်ထောင်သည်ဘဝ၊ ချစ်သူဘဝ ဆိုကတည်းက ပေါင်းစပ်မှု မေတ္တာတရားတွေက လွမ်းခြုံနေပြီမို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အမှားတွေ မြင်လို့ (၃ ၄) သုံးနဲ့ လေး အတိုင်း နီးရက်နဲ့ ဝေးမနေကြစေဖို့၊ ချစ်တဲ့သူတိုင်း မြတ်နိုးနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
(သူငယ်ချင်း ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုမှ နားချမရလို့
စိတ်မောမောနဲ့ ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးပါတယ်-ခရစ္စတလ်)
၂။ တည်းခိုခန်းများတွင် အလုပ်ဆင်းရသော လိင်ဖျော်ဖြေရေး မိန်ကလေးများ
အခန်း နေရာ တစ်ခုတွင် အလုပ်ဆင်းရသော မိန်းကလေးများကို တည်းခိုခန်းများတွင် အလုပ်ဆင်းရသော မိန်းကလေးများထဲတွင် စာရင်းသွင်းလိုက်ရပါသည်။ အခန်းနေရာ ဆိုသည်မှာ ထရံကာ ဓနိမိုးမှ အဆင့်မြင့်တည်းခိုရိပ်သာများအထိ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုထက်အဆင့်မြင့်စွာသော နေရာများလည်း ရှိပါသေးသည် သို့ပါသောလည်း မိမိလေ့လာဖြစ်သည်မှာ နွမ်းပါးစွာ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းနေကြသော မိန်းကလေးများ ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းဧည့်ရိပ်သာများ တည်းခိုခန်းများနှင့် လိင်ဖျော်ဖြေရေးကို အဓိကထားကာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသော နေရာအားလုံးတွင် သူဋ္ဌေး အမျိုးသားသော်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဦးသော လည်းကောင်း အုပ်ချုပ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုနေရာ အများစုကို ယောက်ျားလေးတိုင်းတိုင်းလိုလို သိကြလေ့ ရှိကြပါသည်။ ဝါးထရံကာ နေရာများတွင် ဧည့်သည်နှင့်မိန်းကလေးတို့၏ အခန်းအပြင်မှ ချောင်းကြည့်ခများကိုပင် အခကြေးငွေယူသော လုပ်ငန်းများကိုလည်း တွေ့ရတတ်သေးသည်။
လိင်ဖျော်ဖြေရေး မိန်းကလေးများသည် (15)မိနစ်၊ နာရီပိုင်းမှ တစ်နေ့တာအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင် ဖျော်ဖြေပေးရပါသည်။ သတ်မှတ်ချိန်ပြည့်လျှင် ကျသင့်ငွေ ရှင်းပေးရပါသည်။ လမ်းမပေါ်တွင် ကိုယ်တိုင် ဖောက်သည်ရှာရသော မိန်ကလေးများသည် တည်းခိုခန်းများသို့ သွားကာ အလုပ်ဆင်းရတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါသည်။
မိန်းကလေးများသည် ဧည့်သည်အလာများသော နေ့ရက်များတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် သူမတို့၏ နီးစပ်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရနိုင်သော ဆေးများကို သုံးစွဲကြပါသည်။ တားဆေးများစားခြင်းနှင့် ထိရောက်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါကူးစက်မှုများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မည်သည့် နည်းလမ်းကိုမှ ပုံမှန် သုံးစွဲသည်ဟူ၍ မတွေ့ရပါ။ အလုပ်ချိန်ပြီးဆုံးချိန်တွင် အမျိုးသမီး မအင်္ဂါအတွင်းသို့ ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြောခြင်းများကိုသာ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါသည်။ အများအားဖြင့် အမျိုသားသုံးကွန်ဒုံးများကို ကြေညာကပ်ထားခြင်းနှင့် သုံးစွဲရန်သိကြပါသောလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူအများစုနေထိုင်ရာ ကျေးလက်ဒေသနှင့် နယ်မြို့များတွင် နေထိုင်သော ယောကျာ်းအများစုသည် ကွန်ဒုံးသုံးစွဲခြင်းကို လက်မခံလိုကြပေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာတတ်လက်တစ်ဆုပ်စာ လူတန်းစားများသာ မိသားစုကို မလိုလားအပ်သော ရောဂါများ ကူးစက်နိုင်ခြင်းကို ကြောက်လန့်၍၄င်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာအရ ထိခိုက်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်း ကွန်ဒုံးကို သုံးစွဲကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရန် သိလျက်နှင့် ထိရောက်စွာကုသမှုခံယူဖို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မကုသကြသော မိန်းကလေးများ၊ လွဲမှားသော ကုသမှုများနှင့် နောက်ဆုံးတွင်တော့ AIDS ရောဂါဆိုးကြီးကို ခံစားကြရတော့သည်။ ထိုမိန်းကလေးများထံသို့ သွားကြသော ယောက်ျားတိုင်း သည်လည်း ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ မပြုလုပ်ခြင်းများကြောင့် နိုင်ငံနှင့်အဝှမ်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်သက်သော မနှစ်မြို့ဖွယ်အဖြစ်နှင့် အိမ်ထောင်သည် ယောကျာ်းများသည်ပင် ကွန်ဒုံးကို ဝယ်ခြင်း၊ လက်ဝယ်တွင်ကိုင်ဆောင်ရန် များစွာ ရှက်ရွံ့ဝန်လေးနေကြခြင်း၊ သားဆက်ခြားရန်နှင့် လိင်မှ တဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အထောက်အကူပစ္စည်းအဖြစ် စိတ်ဝယ် မမြင်နိုင်ခြင်းများကြောင့် မလိုလားအပ်သော ဆုံးရှုံးမှုမျိုးစုံ ကြုံတွေ့နေခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပါသည်။
သို့ပါသောလည်း လိင်လုပ်သား မိန်းကလေးတိုင်းတွင် ကာလသားရောဂါအပါအဝင် လိင်နှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများသည် တနေ့တကြားတိုး၍ ဖြစ်ပွါးလျက်ရှိကြသည်။ လိင်လုပ်သားများမှ တဆင့် ၄င်းတို့နှင့် ပတ်သက်မိသောသူများ
အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားများသည် မိမိတို့၏ အိမ်သူသက်ထားများထံသို့ ချစ်သက်လက်ဆောင်အဖြစ် ရောဂါဆိုးများကို တိတ်တဆိတ် သယ်ဆောင် လာကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် မသိနားမလည်သော အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီး များစွာနှင့် အပြစ်မဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တို့သည်လည်း ထိုရောဂါဆိုး၏ အမွေကို လက်ခံရရှိကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးလူကြီးများ အမှာစကား ထားခဲ့ကြတာက
“ရေမြင့်မှ ကြာ တင့်မယ်”
အဋ္ဌာနမေတံ ဘိက္ခဝေ အနဝကာသော
ယံပရူပက္ကမေန တထာဂတံ ဇီဝိတာ ဝေါရောပေယျ
အနုပက္ကမေန ဘိက္ခဝေ တထာဂတာ ပရိနိဗ္ဗာယန္တိ။
ဧတေန သစ္စဝဇ္ဖေန သောတ္တိ တေ (မေ) ဟောတုသဗ္ဗဒါ။
အကျိုးသွား - ရောဂါဝေဒနာများ ကင်းရှင်းစေရန် ရွတ်ဖတ်ကြသည်။
မေတ္တာပို့ခြင်းနှင့် ပစ္စယနိဒ္ဒေသပဋ္ဌာန်းပါဋ္ဌိကို ရွတ်ဖတ်ပေးပြီး ဆုတောင်းပေးခြင်းနှင့်
အလွမ်းပြေစေဖို့ သီချင်းလေး ရှာဖွေပေးလိုက်ပါတယ်။
Singer: Kim Jung Woon 김정운 / Lyrics Source: Melon.Com
(ဒီပိုစ့်လေးက ကျမရဲ့ ကျေးဇူးရှင်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ဖြစ်သွားတာဖြစ်လို့ စာဖတ်သူများကို အထူးအားနာမိပါတယ်ရှင်။ ခရစ္စတလ်)
Posted by Crystal at 12:27 AM2comments
နွေဦးကံ့ကော်များ သြော်ခြံထဲ အလှဝေ ဆွတ်သင်းပျံ့ဝေမြဲ
ထူးအိမ်သင် - နွေဦးကံ့ကော် သီချင်းကို ဤနေရာမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်ရှင်။
ခြောက်ကပ်ကပ် လေတွေ တို့ထိမိလို့
ပုဇဉ်းရင်ကွဲလေး ကိုယ်စား ကဗျာရေးသည်။
ဘဝဇာတ်ခုံ ဆောင်းပါးရှည်တွင် အဓိက အခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပျားဘုရင်မနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းပိုစ့်ကို ရေးရန် သီချင်းရှာ၊ ပုံရှာရင်း ယူကျု့တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော ဒေါင်းအကနဲ့ လှပျိုဖြူ၊ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ အကပဒေသာကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေခြင်းဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ တစ်ခုကို ကျမစဉ်းစားရင်း ပိုစ့်လေးကို အင်တာနက် စာမျက်နှာရေးသားနေမိချိန်မှာ သူမကို သတိရနေခဲ့ပါတယ်။
ပျားဘုရင်မ-သူမကို မြို့တစ်ခုမှာ ခက်ခဲစွာဖြင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်ကြား ထင်ရှားပုံက ဆန်းကြယ်လှတယ်။ ကျမကလည်း ဒီလို ထူးဆန်းတာမှ စိတ်ဝင်စားတာ။ ကဲ ပျားဘုရင်မက ရှင်းပြသော ဖျော်ဖြေခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ပညာရှင်အဖြစ်၊ အောင်မြင်ခဲ့သော သူမဘဝ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသိုလ်ရေးများ အကြောင်းကို လေ့လာ မှတ်သား စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်နော်။ ကျမကတော့ ဘဝမှာ တွေ့ဆုံခဲ့သော လူသားတွေထဲမှာ သူ့ကို မေ့မရနိုင်တော့သလို ကြားဆရာ တစ်ယောက်အနေဖြင့်ပင် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
Posted by Crystal at 11:59 AM2comments
(ပရိသတ်များကို ကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကပေးသော သီချင်းလေးတွေနဲ့ ဧည့်ခံပါတယ်ရှင်။ ကျမရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကလေ သူပြောလိုတာကို စကားနဲ့မပြောပြတတ်ဘူး၊ သူ့အမူအယာတွေနဲ့ သီချင်းတွေကတဆင့် အဓိပ္ပါယ်ဖော်ယူနေရပါတယ်။ ဤလို ဤလိုကြောင့် ကျမလည်း သီချင်းတွေနဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေရပါတယ်ရှင်။ :P)
တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ် (ပထမပိုင်း) မှ အဆက်
လောကတွင် ကိုယ်အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒတွေ ဘာမှကို လုပ်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတာကို သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာ ဘဝကို ဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်လာဖို့ ဆောင်ရွက်ဖို့ အကောင်အထည် ဖေါ်ဖို့ သူလေးနက်စွာဖြင့် စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနှင့် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ထို့နောက် ပထဆုံးအနေဖြင့် ရုံးမှ ခွင့်(10)ရက်ယူဖို့ ခွင့်တင်လိုက်ပါတယ်၊ အားယူဖို့ စိတ်အားရှိဖို့ သူ အနားယူဖို့လိုမယ်လေ။ တစ်ပတ်လောက် ဘယ်သူမှ မတွေ့ပဲ နားနေပြီးနောက်မှာ ချစ်သူထံ စာတစ်စောင်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ချစ်သူကတော့ အံ့သြနေရှာမှာပဲ။ နားမလည်နိုင်ခြင်း တွေနဲ့ သူမ ဘယ်လိုများ တုံ့ပြန်မလဲမသိသေးပါ။ ထို့ပြင် သက်ထားနှင့် ဆွေးနွေးရပါအုံးမည်။ ထို့နောက်.......ကိစ္စများစွာတို့သည် မညီမညာ အဆင်မပြေ လှစွာနဲ့ ဘဝတစ်ခုထဲ ခါးသက်ပူပြင်းတဲ့ အရာတွေ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းခဲ့တော့သည်။
“ဆရာ အစ်မ-သီတာ လာပါတယ်” လက်ထောက်ဝန်ထမ်းလေး၏ စကားအဆုံးဝယ် သီတာဆိုသော ကျွန်တော့်ချစ်သူသည် စိတ်နှင့်လူ မကပ်သည့်အလား တစ်လှမ်းချင်း လှမ်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမလှမ်းဝင် လာချိန်မှာတော့ ရင်မဆိုင်ရဲသော မျက်နှာကို တဖက်လှည့်ထားရင်း
“ဘာလို့ အပင်ပန်းခံပြီး လိုက်လာရသလဲကွယ်”
“...........ကို့ မျက်နှာကို လာကြည့်တာပါ၊ ဘဝတစ်ခုလုံး ဗြောင်းဆန်ရတဲ့ကိစ္စက စာတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ဘူးလေ။ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သေချာသိချင်လို့ပါ။ ကို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း တွေ့ပြီးမေးခဲ့ပြီးပြီ။ ကို ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ ပြီးသွားရောလား။ ဒါ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ ကိုက ယူဆထားတယ်ပေါ့လေ။ သီတာရဲ့ခံစားချက်ကိုရော ကို ထည့်မတွက်တော့ဘူးပေ့ါ။ သီတာကိုတော့ မငဲ့ညှာတော့ ဘူးပေါ့၊ ဟုတ်လား။ ဘာကြောင့်လဲ ကို ပြောပြပါအုံး။ ဒီလို မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ မဖြစ်စလောက် ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကို အလေးအနက် မထားလိုက်ပါနဲ့။ သီတာနဲ့ ကို တို့ရဲ့ ဘဝအတွက် ဘာတွေကိုမှ သီတာ ဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ သီတာဆီကိုပဲ ပြန်လာခဲ့ပါ။ အဲဒီမိန်းကလေး တောင်းဆိုတာမှန်သမျှ သီတာ ပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတောင်းဆိုတာ ကို တော့ မဟုတ်ရဘူးနော်။ သူ့ဘဝတစ်ခု ထောင်မတ်ဖို့ သီတာတို့ ဘဝနှစ်ခုကို စတေးပေးရတော့မှာလား၊ မရက်စက်လွန်းဘူးလား။ သီတာလည်း မိန်းမသား တစ်ယောက်ပါ။ ကို သူ့ကို စာနာလို့ဆိုရင် သီတာ ဘဝကိုတော့ နစ်နာပါစေပေါ့။ ဒီလိုဖြစ်နေပြီလား..........ကို တစ်ခုခုတော့ သီတာကို ပြောပါအုံး။ ”
ကြေကွဲစို့နှင့်စွာ မျက်ရည်လည်ရွဲနှင့် ပြောနေရှာသော ချစ်သူကို ကြေကွဲစွာကြည့်မိရင်း စကားလုံးတို့က ထွက်မလာ၊ သို့သော် ပြောသင့်တာတွေကို ချစ်သူ စိတ်သက်သာအောင် ပြောရပေအုံးမည်၊ လက်ရှိအဖြစ်မှန်ကို ပြောရပေအုံးမည်။ ချစ်သူကို သူ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီလို စကားတွေ ပြောရဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်ခဲ့ပါ။ အခုတော့ ပြောရချေအုံးမည်။
“သီတာ ကိုတို့ ချစ်သူသက်တမ်းမှာ သီတာ ငိုနေတာ ဒါပထမဆုံးမြင်ဖူးခြင်းပါပဲ။ သီတာကို နစ်နာစေလိုသော စိတ် ကို့မှာ မရှိခဲ့တာအမှန်ပါ။ သီတာ စိတ်မချမ်းမသာအောင် တမင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ရပါဘူး။ တကယ်တော့ ကို့အတွက်လည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဟိုမိန်းကလေးအတွက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီလမ်းကို ရွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းက ကို့ဘက်က ကြည့်ရင် သီတာကို မနစ်နာစေချင်တော့တာဖြစ်ပြီး ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦး၊ ဘယ်သူ့ကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ သူလည်း အသက်ရှင်ပါစေ။ အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ ဟိုမိန်းကလေး ကိုယ်ဝန်အပ်ချိန် သွေးစစ်တဲ့အဖြေမှာ ကာလသားရောဂါပိုး ရှိနေပြီ ဖြစ်တာကြောင့်၊ ကို့မှာလည်း ဒီပိုးတွေ ကူးခဲ့ပြီ။ မသန့်စင်နိုင်တဲ့ ခန္ဓာနဲ့ သီတာကို လက်တွဲဖို့ တွန့်ဆုတ်ခဲ့ရပြီ။ အခုအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး သွေးစစ်ရအုံးမယ် ဒီလိုအဖြစ်တွေနဲ့ ကို သီတာနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ၊ ကို့ဘဝအမှောင်ထဲကို သီတာကို မခေါ်ရက်တော့ပါဘူး၊ သီတာ ဘဝ အေးချမ်းနေတာ ကို့ကြောင့် မပျက်စီးစေချင်ဘူး၊ အပြစ်မရှိတဲ့ လူသားတစ်ဦး ဒုက္ခမရောက်ရအောင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတာပါ။ ကို့ကို ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်လိုက်ပါနဲ့တော့။ ကိုက ညစ်နွမ်းတဲ့သူ ဖြစ်နေပါပြီ။ ကို တစ်ယောက်တည်းတောင် ဘဝပျက်ခဲ့ရပြီ။ ကို ပြောတာကို ကြိုးစားပြီး လက်ခံပေးပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အမှားတွေ ကြားထဲက လုပ်ပေးနိုင်တာက သီတာကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြင့် သီတာရဲ့ ဘဝကို ကယ်တင်နိုင်တာပါပဲ။ ကိုရဲ့ အမှားတွေ အရှုံးတွေထဲက ဒါလေးပဲ ကို လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။”
“ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ ကိုရယ်...........”
ဒီလိုနှင့် နောင်တစ်နှစ်ခန့်အကြာမှာ ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ချီထားသော ယောကျာ်းတစ်ယောက်နှင့် သူ့နောက်မှ ခပ်ခွာခွာတွင် မိန်းမငယ်တစ်ယောက် ဟိုငေး ဒီငေးနှင့် သွားနေတာကို တွေ့ကြရပါသည်။
အသွင်မတူတော့လည်း ခြေလှမ်းတွေက မညီညာနိုင်ဘူး။
အကြည့်မတူတော့လည်း အာရုံတို့က တစ်ထပ်တည်း မကျနိုင်ဘူး။
မတူညီတာတွေကို ပေါင်းစပ်လိုက်တော့လည်း ပေါင်းစပ်မှု ကာရန်တွေက မလှပခဲ့ဘူး။
ကျောင်းဆရာမလေး မသီတာကတော့ ဘဝကို တရားသဖြင့်ရှုမြင်ရင်း ကိုယ့်ဘဝနှင့် ရင်းလို့ ရခဲ့သော ဘဝသင်ခန်းစာများကို သူမ၏ တပည့်လူငယ်လေးများအား လမ်းမမှားကြဖို့ရန် အထပ်ထပ်အခါခါ မှာကြားနေမိပါတော့သတည်း။
Posted by Crystal at 5:01 PM4comments
Posted by Crystal at 11:05 PM 1 comments
အဟတ် ဒီသီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ခိုင်းတော့ ဘယ်လို ယူဆရင်ကောင်းမလဲ။
ကျမ သိပ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ကာတွန်းကားလေးပါ။ ကျမတို့ ဇနီးမောင်နှံ ဒီကာတွန်း ကားလေးကို ခဏခဏ ပြန်ကြည့်နေကြပါ။ သီချင်းလေးက စာသားနဲ့ သံစဉ် အပြင် အဆိုတော်ရဲ့ အသံကိုပါ အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်ရှင်။ သီချင်းလေးကို ရှာပေးတဲ့ ကျမရဲ့ အိမ်ဦးနတ်ကြီးကို ကျေးဇူးဆပ်ရအုံးမယ်။
Posted by Crystal at 12:02 PM2comments
မျက်စိကိုက်လို့ ပိုစ့်မရေးနိုင်ချိန်မှာ ကျေးဇူးရှင်က သီချင်းပဲ နားထောင် ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ရှင်။ အခုတော့ ကျမ သီချင်းပဲ နားထောင်နေရပါတယ်။ ပိုစ့်တွေ ရေးတာ ခဏလေး နားထားပါမယ်နော်။
Posted by Crystal at 10:19 PM 1 comments
တစ်ခါက ရပ်ကွက်လေးတစ်ခုတွင် ဦးလူလှသည် ဦးရှင်ကြီးဆွမ်းတင်ပေးသော အလုပ်လေးဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလေ၏။ ဝါဝင် ဝါထွက်ဆိုလျှင် ရိုးရာအရ ဆွမ်းတင်ကြသောကြောင့် အလွန် အလုပ်များကာ နေ့ရက်နှင့် အိမ်များကိုပင် အတော်လေးသေချာစွာ မှတ်ရလေ၏။ တစ်ခါတရံ ရက်များပင် ပြည့်နေသောကြောင့် စောင့်ဆိုင်းကြပါရန် တောင်းပန်ရသေး၏။
ထိုရပ်ကွက်ရှိ ဒေါ်လှသည် ယနေ့တွင် လွန်စွာအလုပ်ရှုပ်နေ၏။ ဦးရှင်ကြီးဆွမ်းတင်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဈေးဝယ်ချက်ပြုတ်နှင့် အိမ်နောက်ဖေးမှ မထွက်နိုင်။ မိမိအိမ်တွင်လည်း ယောက်ျားသားက မရှိသောကြောင့် ဦးရှင်ကြီး ဆွမ်းတင်ရန် အလို့ငှာ ဆွမ်းတင်ပေးသော ပုဂ္ဂိုလ်အား ခေါ်ရန်အတွက် အလွန်အားကိုးရသော (၁၄)နှစ်အရွယ် သမီး အလိမ္မာလေးအား မိမိတို့ အိမ်၏ မျက်စောင်းထိုးတွင် ဦးရှင်ကြီးဆွမ်းတင် ပေးနေသော ဦးလေးကြီးကို သူတို့အိမ်ပြီးလျှင် လှမ်းခေါ်ဖို့ စောင့်ကြည့်ခိုင်းထား၏။ ဦးလူလှ သည်လည်း ဟိုအိမ်က ဆွမ်းတင်ခြင်းအလုပ်ပြီးသော ဆွမ်းတင်သော ခုံနတ်စဉ်လေးကို ထမ်း၍ ထွက်လာခဲ့လေ၏။
ထိုအခါ သမီးငယ်က အိမ်နောက်ဖေးမှ ချက်ပြုတ်နေသော သူ့အမေအား
“မေမေ ဟိုလူကြီးထွက်လာပြီ၊ သမီး ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ”
“အော် သမီးကလည်း ဦးလေးကြီးလို့ ခေါ်ပေ့ါ”
“ဦးလေးကြီးလို့ ခေါ်ရင် တခြားဦးလေးကြီးတွေ လှည့်ကြည့်နေအုံးမယ်”
“အမယ်လေး ခေါ်ပါ မြန်မြန်၊ တော်ကြာ ထွက်သွားအုံးမယ်”
“အင်း အင်း၊ သမီး မြန်မြန်ခေါ်လိုက်အုံးမယ်၊ ဦးလေးကြီး၊ မေမေ မကြားဘူးတော့ သူ”
“ဦးလေးကြီးရေ....လှည့်မကြည့်ဘူး၊ ဟွန်း....ဦးရှင်ကြီးတင်တဲ့ ဦးလေးကြီး၊ ဟာ.....မကြားပြန်ဘူး”
“ဦးရှင်ကြီးသည်.........လာပါအုံး” ဟု ဤသို့လျှင် အသံကုန်ဟစ်အော်ခေါ်မှုကြောင့် ဦးရှင်ကြီးဆွမ်းတင်သော ဦးလူလှသည် “ဟဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်သတုန်း” လှည့်ကြည့်သောအခါ
“ဦးရှင်ကြီးသည် သမီးတို့အိမ်လည်း ဆွမ်းတင်မလို့”၊
အော် မလှရဲ့ သမီးကိုး ဒီတော့မှ မိမိ၏ ဖြစ်အင်ကို ရယ်မောမိလေတော့သည်။ ပတ်ဝန်း ကျင်အိမ်တွေမှလည်း တခိခိနဲ့ ရယ်မောသံများကို၎င်း၊ ဒေါ်လှသည်လည်း သမီးတော်၏ ခေါ်ဆိုမှုကို၎င်း မကြာခဏ ပြောပြမိကြကာ ရယ်မောဖြစ်လေတော့သည်။
ဦးရှင်ကြီး (အွန်လိုင်းမှာ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်)
Posted by Crystal at 11:43 AM2comments
Posted by Crystal at 3:50 PM3comments